Fomba fiasa vaovao mihitsy no hanohizana ny fetin’ny Trozona fanao isan-taona ao an-toerana. Miisa 4 ny tanjona dia ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanaovana laharampahamehana ny fiarovana ireo trozona. Ny ranomasin’ity nosy kely misy fokontany miisa 18 ity mantsy no hany mamondrona ireo trozona eto Madagasikara sy fakany taranaka, raha ny fanazavana. Ao koa ny fampandraisana anjara ireo mponina amin’ny asa sosialy mety hateraky ny hetsika izay mifandray amin’ny antony fahefatra dia ny fampiroboroboana ny ekonomia ao an-toerana. Miisa 20.000 isan-taona ireo mpizahatany tonga manatrika ny hetsika ary andrasana hiampy 3.000 izany amin’ity. Manomboka any amin’ny mpivarotra anana ka hatramin’ireo hotely ao an-toerana, hoy ny minisitera tompon’andraikitra dia mandray anjara mivantana sy an-kolaka amin’ny fampandrosoam-pirenena aterak’io. Ny resaka hotely fotsiny, ohatra, dia saika feno ny 75% rehefa tonga io fotoana io.